ADS-2400N | Brother Myanmar
ရိုးရိုး Printers များ နှင့် ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်သည့် Printers များ
A3 ဆိုဒ် print ထုတ်ပေးနိုင်မည့် Printers
အိမ်များအတွက် သင့်တော်သည့် Printers
ရုံးများအတွက် သင့်တော်သည့် Printers
သယ်ရလွယ်ကူသည့် Scanners များ
Desktop Scanners များ
Label Printers များ
အိမ်တွင်းသုံး Label Printers များ
လုပ်ငန်းခွင်သုံး Label Printers များ
ရုံးသုံး Label Printers များ
သယ်ရလွယ်ကူသည့် label Printers များ
အဝတ်အထည်ပေါ်တွင် print ရိုက်နှိပ်နိုင်သော Printers များ
လုပ်ငန်းကြီးများတွင် အသုံးပြုရန်သင့်တော်သည့် အပ်ချုပ်စက်များ
နောက်ဆုံးရ Promotion များ
ကျွန်တော်တို့ Brother အကြောင်း
Brother ADS-2400N Scanner
နှိုင်းယှဉ်ရန် ထပ်ပေါင်းခြင်း နှိုင်းယှဉ်ရန် ထပ်ပေါင်းခြင်း
ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်နိုင်သည့် scanner ADS-2400N
Product Brochure (PDF/0.44MB)
40ppm/80ipm အထိ စာမျက်နှာ နှစ်ဖက်ကို colour scan ဖတ်ပေးနိုင်သည့် အမြန်နှုန်းရှိခြင်း
A4 အရွယ်အစားရှိ စာရွက်များမှ ဖောင်းကြွ ပလပ်စတစ်ကဒ်ပြားများလိုမျိုး စာရွက်ဆိုဒ်မျိုးစုံ ၅၀ ရွက်အထိ ထည့်ထားနိုင်ခြင်း
TWAIN, WIA, ICA, SANE drivers တွေနဲ့ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ရယူလိုက်ပါ
ABBY FineReader Sprint နှင့် Nuance PaperPort အပါအဝင် Premium software bundle များကိုအခမဲ့ရရှိနိုင်ခြင်း
Scan ဖတ်ပြီး ကွန်ယက်မှတစ်ဆင့် မျှဝေနိုင်ခြင်း
Scan များစွာဖတ်တဲ့အခါ အချိန်ကုန်သက်သာစေခြင်း
External Storage သို့ scan ဖတ်နိုင်ခြင်း
ပိုပြီး ကြည့်ရန်အနည်းဆုံးကို ကြည့်ရန်
အထောက်အပံ့ နှင့် အပိုပစ္စည်းများ
ဒေါင်းလော့ နှင့် အရင်းအမြစ်
ကြိုးဖြင့်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သည့် မြန်နှုန်းမြင့် Desktop Scanner
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ADS-2400N pinter က စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး software နှင့်အတူ desktop ကွန်ပျူတာများနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
တစ်မိနစ်လျှင် စာမျက်နှာ ၄၀ အထိ မြန်နှုန်းမြင့် မျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်လုံးကို scan ဖတ်ခြင်း*
ထူးခြားကောင်းမွန်သည့် scan အရည်အသွေး
စာရွက်ရေ ၅၀ အထိ အလိုအလျောက်ထည့်ထားနိုင်သောစနစ်
USB သို့ တိုက်ရိုက် scan ဖတ်နိုင်ခြင်း
TWAIN, ISIS, SANE, WIA, ICA တို့နှင့် အလွယ်တကူ ချိတ်ဆက်နိုင်သော Driver
စာရွက်စာတမ်းများ အချက်အလက်များအတွက် အကောင်းဆုံး capture ဆော့ဝဲလ် Kofax နှင့် တရားဝင်တွဲဆက်သုံးနိုင်ခြင်း
လုပ်ငန်းသုံး ABBYY FineReader software ပါဝင်ခြင်း
သင့်ရဲ့ ရုံးလုပ်ငန်းခွင်တွင် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုပါ
သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး တိုးတက်စေရန် စာရွက်စာတမ်းများကို ရုံးတွင်း ကွန်ယက်တွင်တည်ဆောက်ထားသည့် folder ထဲသို့ တိုက်ရိုက် scan ဖတ်နိုင်တဲ့အတွက် သင်ရဲ့ စာရွက်စာတမ်းများကို အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့် တစ်ဖွဲ့၊ ဌာနတစ်ခုနှင့် တစ်ခုသို့ မြန်မြန်နှင့်လွယ်လွယ် မျှဝေနိုင်ပါသည်။
စာရွက်အရွယ်အစားများစွာကို ကောင်းမွန်စွာ scan ဖတ်နိုင်ခြင်း
မျက်နှာပြင်ၤနှစ်ဖက် A4 ဖြစ်စေ ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်း ပလက်စတစ် ID ကတ် ဒါမှမဟုတ် အလွန်ရှည်သည့်စာရွက်ဖြစ်စေ သင်အလွယ်တကူ PDF ဖိုင်၊ email attachments သို့ ပြောင်းနိုင်ပြီး USB ထဲသို့ပါ အလွယ်တကူ scan ဖတ်နိုင်ပါသည်။
ခုံပေါ်တင်သုံးနိုင်တဲ့ အရွယ်အစားနှင့် အကြမ်းခံသောပုံစံတို့ကြောင့် ရုံးတွင်းနှင့် သုံးစွဲသူများနှင့်တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံသည့်နေရာတွင်မှာပါ အသုံးပြုနိုင်သည့် scanner ဖြစ်သည်။
*နောက်ဆုံး ထွက်ရှိထားသော Firmware update များကို http://support.brother.com တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။
Document Size - Multiple Papers - Width
51 mm to 215.9 mm
Document Size - Multiple Papers - Length
51 mm to 355.6 mm
Document Size - Single Paper - Width
Document Size - Single Paper - Length
51 to 5,000 mm
Color Depth - Input
30-bit colour processing
Color Depth - Output
24-bit colour processing
Resolution - Optical
Max. 600 dpi × 600 dpi
Max. 1,200 dpi × 1,200 dpi
Max. 215 mm
306 mm x 250 mm x 258 mm
Up to 50 pages (Paper: 80 g/m²)
AC: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Power Consumption - Scanning
Power Consumption - Power Saving / Deep Sleep
Humidity - Operating
Humidity - Storage
TWAIN Compliant - Windows®
Windows® XP Home (SP3) / Windows® XP Professional (SP3, x32 only) / Windows Vista® / Windows Server® 2003 (only 32 bit) / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2 / Windows®7/ Windows® 8 / Windows® 8.1v
TWAIN Compliant - Mac OS
OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x
WIA Compliant - Windows®
Windows® XP (SP3) / Windows Vista® / Windows®7/ Windows® 8 / Windows® 8.1
ICA Compliant - Mac OS
ISISTM Compliant - Windows®
Windows Vista® / Windows®7/ Windows® 8 / Windows® 8.1
UseaUSB 2.0 cable (Type A/B) no more than 2.0 meters long.
ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအသေးစိတ် ကြည့်ရှုရန်ပါဝင်သောပစ္စည်း အသေးစိတ်ကို ဖုံးကွယ်ထားခြင်း
500 scans (expected life)
Plastic Card Carrier Sheet
Pick-up Roller/ Reverse Roller
အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ နှင့် အပိုပစ္စည်းများ အားလုံးကို ကြည့်ရှုရန်
မေးလေ့မေးထရှိသောမေးခွန်းများ နှင့် ပြဿနာရှာဖွေဖြေရှင်းခြင်းများ
ထောက်ပံပေးသော OS အချက်အလက်များ
ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ကို ပြန်ကြားပေးရန် ရက်အနည်းငယ် ကြာပါမည်
သင်ရှာမတွေ့ဘူးလား။ နောက်တစ်ခု ရှာကြည့်ပါ။
စုံစမ်းမှု တင်သွင်းချက် အောင်မြင်သည်။
* ပြထားသည်များကို မဖြစ်မနေလုပ်ရမည်
ကျွန်တော်တို့ သင့်အတွက် ဘာများဆောင်ရွက်ပေးရမလဲ။ *
ကျွန်တော်တို့ သင့်ကို ဘယ်လိုပြန်လုပ်ဆောင်ပေးရမလဲ။
ကျေးဇူးပြုပြီး သင့်အီးမေးလ် လိပ်စာ သို့မဟုတ် ဖုန်းနံပါတ် ပေးရန်
နိုှုင်းယှဉ်ရန်အတွက် အမျိုးအစားတူ ထုတ်ကုန် ၃ မျိုးအထိ ပေါင်းထည့်နိုင်သည်။
သုံးစွဲသူ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အကူအညီ
ဆက်သွယ်ရန် (Follow လုပ်ပါ)
Brother ၏ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ကွန်ယက်များ
Brother Global ဝက်ဆိုဒ်သို့သွားရန်